စက်တပ် rotary actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > Rotary လျှပ်စစ် Actuator > စက်တပ် rotary actuator
စက်တပ် rotary actuator
AOX-R ကို ကို စီးရီး စက်တပ် rotary actuaသို့r ဖြစ် အသစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဘို့ အထူးသဖြင့် သေးငယ်သော အလုံး & ပလပ်ဂ် အဆို့ရှင် နှင့် damper auသို့mation.Because ကျွန်တော်တို့၏ actuaသို့r များမှာ အားလုံး ကျော်လွန် အဆိုပါ ကမ္ဘာကြီး, ကျွန်တော်တို့ များမှာ ကျြောစောသော ဘို့ အရည်အသွေး, တည်ငြိမ် စစ်ဆင်ရေး နှင့် လုံခွုံသော စစ်ဆင်ရေး. ကျွန်တော်တို့၏ AOX-R ကို ကို စီးရီး စက်တပ် rotary actuaသို့r, အဖြစ် အစဉ်အမြဲ, ဆက်လက် thဖြစ် လမ်းကြောင်းသစ် နှင့် လိမ့်မည် ဘယ်တော့မှ change.We excpect သို့ ဖြစ် yကျွန်တော်တို့၏ ရှည်လျားသော သက်တမ်း မိတ်ဖက် တွင် အဆိုပါ အနား အနာဂတ်။
1. ခိုင်မြဲသောချေးယဉ်အိမ်ယာ: အဆိုပါ shell ကို anodic ဓာတ်တိုးကုသမှုနှင့် polyester အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူ, လူမီနီယံအလွိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ IP68 optional ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်ခိုင်မာတဲ့ချေး-ခံနိုင်ရည်နှင့်ဝင်း IP67, NEMA4နဲ့6ဖြစ်ပါတယ်။
AOX-R ကိုစီးရီးများအတွက် 2. ပြင်ပ Module Module ရဲ့ rotary actuator စက်တပ်: အ module တစ်ခု၏အာကာသတိုးပေးရန်က module ကိုပိုမိုတည်ငြိမ်စေနှင့်တစ်ဦးမဟုတ်တော့ဝန်ဆောင်မှုဘဝရပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါပြင်ပတွင်အလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်၏သစ်တံဆိပ်ခတ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာတွေ့ကြံလိုအပ်ချက်နှင့်ရေကိုရှောင်ကြဉ်: AOX-R ကိုစီးရီး rotary actuator စက်တပ်များအတွက် 3. နယူးစက်မှုအနေအထားကိုညွှန်ပြချက်။
AOX-R ၏ဂီယာအုံစီးရီးစက်တပ် rotary actuator PPC ပစ္စည်း (PPC ဆန့အစှမျးသတ်တိ 11.84MPL, အပူချိန်ခုခံ80Âဒီဂရီစင်တီဂရိတ်, လူမီနီယံအလွိုင်းဆန့အစှမျးသတ်တိ 75MPL, C ကို°အပူချိန်ခုခံ400Â) ထက်ပိုမိုအားကောင်းစေခြင်းငှါလူမီနီယံအလွိုင်းချမှတ်, ဂီယာ 40Cr ၏ဖန်ဆင်းထားသည် ပိုကောင်းမြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံအတူအဆင့်မြင့်ပြီးပိုတာရှည်ခံသုံးအပူကုသမှု, တည်ငြိမ်မှုပြီးနောက်။
1997 ခုနှစ်မှစ. ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနည်းပညာ R & D စင်တာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည် R & D ကိုဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်အရင်းအမြစ်များအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံ, ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနှင့်အတူကောင်းသောစီမံကိန်းကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဆံရေးကိုထူထောင်ထားပြီးစတာတွေက high-tech ခွက်ကောလိပ်များနှင့်သုတေသနဌာနတို့အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, အဆင့်မြင့်ကိရိယာများကိုမိတ်ဆက်မိတ်ဆက် Wenzhou တက္ကသိုလ်နှင့် Wenzhou အသက်မွေးမှု College.We ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မား AOX-R ကိုစီးရီး rotary actuator စက်တပ်ဦးတည်သွားစေရန်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
2. AOX-R ကိုစီးရီး၏လျှပ်စစ်တပ်ဆင်စက်တပ် rotary actuator လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ခြင်း၏သက်ဆိုင်ရာဆောက်လုပ်ရေးလိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ရကြလိမ့်မည်ကို၎င်း, ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်-အထောက်အထားထုတ်ကုန်âတပ်ဆင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရကြလိမ့်မည် Explosive အန္တရာယ်ရှိLocationsâအတွက်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်။
3. Pay ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစဉ်အတွင်းကိုင်တွယ်ရန်အာရုံစိုက်မှုနှင့် load နှင့် AOX-R ကိုစီးရီး၏အလေးချိန်နှင့်အညီရြဖို့ forklift ကိုသုံးပါသက်ရောက်မှုကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးမပျက်စီးစေရန် rotary actuator ယန္တရားပုံစံစက်တပ်။
မေး: ငါတို့သည်သင်တို့၏ AOX-R ကိုစီးရီးအပေါ်ပုံနှိပ်ခံရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုဂိုသို့မဟုတ် comany နာမကိုအမှီ rotary actuator သို့မဟုတ်အထုပ်စက်တပ်ရနိုင်မလား?
မေး: ဘယ်လို AOX-R ကိုစီးရီးဆိုကျေးဇူးတင်လွှာသွင်းကုန်၏မပါဘဲ rotary actuator စက်တပ်အမိန့်ပေးနိုင်သနည်း
hot Tags:: စက်တပ် rotary actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်